प्रेम विवाह गरेको श्रीमतीको मृत्यु भएको २५ दिन पछि श्रीमानले लाशलाई चिहानबाट निकालेर जे गरे कारण देख्दा सबै आश्चर्य चकित ! – List Khabar
Home / समाचार / प्रेम विवाह गरेको श्रीमतीको मृत्यु भएको २५ दिन पछि श्रीमानले लाशलाई चिहानबाट निकालेर जे गरे कारण देख्दा सबै आश्चर्य चकित !
admin October 27, 2021 समाचार Leaveacomment 249 Views
Previous होटलमा युवती राखेर गर्थे यस्तो ब्यबसाय ! सुरेश र ऋषिले ति महिलाहरुलाई यस्तो सम्म गर्थे कि थाहा पाउदा प्रहरी पनि चकित पर्यो !
Next दसैँपछि लगातार बढेको सुनको मूल्यमा गिरावट , कति छ आजको मुल्य ?